किन जाने विदेश ? स्वदेशमै छ काम, कपाल काटेरै मालामाल (अडियोसहित) – Online Jagaran
किन जाने विदेश ? स्वदेशमै छ काम, कपाल काटेरै मालामाल (अडियोसहित)
१६ कार्तिक २०७५, शुक्रबार ०३:२९ November 2, 2018 जागरण
सुर्खेत, १६ कात्तिक (जागरण) । स्वदेशमा कामको कुनै पनि सम्भावना नदेखेर खाडी मुलुकमा खुन पसिना बगाउने नेपाली युवाहरु धेरै छन् । तर मिहेनत अनि हातमा सीप हुनेहो भने नेपालमै पनि गरी खान सकिन्छ भन्ने उदाहरण केही युवाले देखाएका छन् । तराई मधेशका विभिन्न जिल्लाबाट सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आई धेरै युवाहरु कपाल काट्ने व्यवसाय संचालन गरेर मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । जनकपुरका कमलेश ठाकुरले वीरेन्द्रनगरमा सैलुन व्यवसाय संचालन गर्नुभएको २४ वर्ष भयो । उहाँ यो पेसाबाट मासिक २० देखी २५ हजार कमाउदै आउनु भएको छ ।
ठाकुरले आफुसँगै अन्य ६ जनालाई पनि रोजगारी समेत दिनुभएको छ । यस्तै, ठाकुरजस्तै सुनसरीबाट १५ वर्ष अघि सुर्खेतमा आएर यही व्यवसाय गर्नुभएका कर्म बहादुर ठाकुरले पनि अहिले ५ जनालाइ रोजगारी दिनुभएको छ ।
जनकपुरबाट आएर सुर्खेतमा नै पहिलो पटक कपाल काट्ने व्यबसाय सुरु गर्नुभएका नेपाल नायल संघ सुर्खेतका अध्यक्ष अर्जुन ठाकुरले अहिले पाँचजना लाई रोजगार दिनुभएको छ । विगत २९ बर्षदेखी पेसामा संग्लन ठाकुरले घरपरिवारको खर्च व्यबस्थापन गरेर मासिक २० देखी २५ हजार कमाइ गर्नुहुन्छ । अब यो पेसालाई आधुनिकता तर्फ लैजाने योजना उहाँको छ ।
सुर्खेतमा पछिल्लो समय ३५ वटा सैलुन व्यबसाय सञ्चालित छन् । यहि पेसाबाट धेरै युवा स्वरोजगार बनेका छन् । कामका लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचलाई चिर्दै यी युवाहरुले स्वदेशमै उदाहरणीय काम गरेका छन् । देश विकासका लागि प्रमुख आधार मानिएका युवाहरुको सीप र दक्षतालाई ध्यान दिँदै सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक छ ।
Tagged युवा स्वराेजगारः
Hello Dohori With Govinda Bharati 2075-07-16